Hamongotra Ny Andiana Fifindra-monina Vaovao Ve Ny Breziliana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2013 14:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Español, Português, русский, Italiano, English
Ity lahatsoratra ity dia santionan'ireo lahatsoratray momba ny Fifandraisana sy Fandriampahalemana Iraisam-pirenena
Fahazoan-dàlana Breziliana. Avy amin'ny TheTransparentEyeball ao amin'ny flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Mitarika andiana fifindra-monina any Brezila ny krizy ara-bola maneran-tany, ady ary ireo hetraketraky ny tontolo iainana. Araka ny voalazan'ny Minisitry ny Fitsarana, ny isan'ny mpifindra monina ara-dalàna tany Brezila dia nitombo 50% tao anatin'ny enim-bolana tamin'ny [pt] 2012. Ny ankamaroan'ny mpifindra monina dia avy any Haiti, Bolivia, Espana, Frantsa ary Etazonia.
Tsy niafina tamin'ireo fampielezam-baovao lehibe sy ny vahoaka ireo vao tonga. Vao haingana ny Domingo Espetacular, fandaharana malaza iray, no nandefa fanadihadiana [pt] atao hoe “Perseguidos” (“Enjehina”) izay mitantara ny tantaran'izy ireo. Mpibilaogy Breziliana iray, Pedro Migao [pt] no nandokandoka ny fandaharana tamin'ny famaritana ireo antony maro samihafa izay mahasarika ireo mpifindra-monina ho any Brezila.
Na izany aza dia mbola adihevitra mafàna ireo vokatra ateraky ny fisondrotan'ny fifindra-monina. Tao anaty lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Endrika hafa an'ny Mpilalao an'Izao tontolo izao” tao amin'ny Mundorama.net [pt], milaza i Patricia Martuscelli fa raha toa i “Eoropa taloha” manao ireo politikam-pifindra-monina hentitra kokoa ao anaty fahasahiranana ara-ekonomika, i Brezila kosa tsy mbola nametraka politika matotra ho azy:
Azo tsoahana fa noho ny tsy fahafahany manome fahafaham-po feno amin'ny fitakian'ireo vahoakany, dia ho sarotra ho an'ny governemanta ny hiatrika ny vidim-piainana anatiny sy ivelany noho ny toerana misy azy amin'ny maha-mpisehatra iraisam-pirenena azy, indrindra momba ireo mpifindra-monina sy ireo sesitany. Kanefa, arakaraka ny fanemoran'ny Brezila ny famahàna ireo olana ireo no maha-ratsy ny toe-javatra, ka maneritery ny vahoaka.
Mpibilaogy iray hafa, Patrícia Mendonça, dia milaza fa tokony hampiantrano ireo mpitsoa-ponenena ny fanjakana Breziliana na dia eo aza ny fahantrana ankapobeny:
Na eo aza ny mety ho zavatra hampinoany antsika, mbola miaina anaty fahantrana ny vahoaka Breziliana amin'ny faritra maro. Ahitàna haintany amin'ireo faritra samihafa. Ary misy koa ireo fonenana tsizarizary (…) Ny fahamaroan'ny fisiana kilasy D sy E dia vokatry ny trosa omen'ireo orinasa tsy miankina (Casas Bahia masina), saingy mbola hitarika ny fidangan'ny trosa mavesatra eo amin'ireo tokantrano izany aoriana kely.
Fanontaniana iray mipetraka: Ampy ve ny hoenti-manana mba hampiantranoana ireo mpitsoa-ponenana ireo? Afaka manome lanja azy ireo ve isika?
Misy fetrany ny fahamendrehana kely indrindra na amin'ireo mahantra indrindra amintsika aza, izay ambony kokoa noho ny azony tany amin'ny fireneny, raha ny marina.
Manodidina ny 4500 avy amin'ny 75 ireo mpitsoa-ponenana [pt] any Brezila, ka ny betsaka indrindra dia avy any Angola sy Kolombia. Toy ireo any amin'ireo firenena hafa, ireo mpitsoa-ponenana sy mpifindra-monina any Brezila dia avy amin'ireo mahantra indrindra eo amin'ny fiaraha-monina. Nefa, Brezila etsy andaniny miezaka ny handray fepetra mivaingana mba hiarovana ireo mpifindra-monina amin'ny fanandevozana. Any São Paulo, ohatra, nofidiana vao haingana ny lalàna mikasika ny fanafoanana ireo fananganana orinasa hita manao asa fanandevozana. Ny Komisiona ambony ho an'ny Mpitsoa-ponenana ao amin'ny Firenena Mikambana any Amerika dia namolavola ny drafitrasa “Hamafiso ny Feonao” mba hanampiana ireo vehivavy niharan'ny herisetra, toy izay naseho tamin'ity lahatsary amin'ny teny Portiogey ity:
Miomana amin'ny fahabetsahan'ny mpifindra monina miditra koa i Brezila mba hampitomboana ny toekarem-pirenena. Ny tsy fisian'ireo manampahaizana matihanina no antony mavesa-danja heverina ho mahatonga ny fihemoran'ny toekaren'i Brezila, toe-javatra iray izay antenain'ny governemanta fa ho voavaka amin'ny fisarihana ireo mpifindra-monina manam-pahaizana [pt] ho ao amin'ny firenena. Ny fampiroboroboana ireo politikan'ny fifindramonina mahomby, noho izany, dia mitondra fandraisan'anjara amin'ny lazan'i Brezila ho tanjaka maneran-tany vao misondrotra.
Ity lahatsoratra ity sy ireo dikanteny Espanola, Arabo ary Frantsay dia araka ny fitakian'ny Tambajotram-piarovana iraisam-pirenena (ISN), tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa mba hanandratana ny feon'ny olom-pirenena momba ireo olan'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fandriampahalemana maneran-tany. Navoaka voalohany tamin'ny bilaogy ISN ity lahatsoratra ity, jereo ato ireo tantara mitovy amin'izany.